Myanmar VES – Mogok Rubies, Sapphires, Diamonds.
» ABOUT US Myanmar VES that is creating high quality ornamental jewellery of outstanding Designs. A large gems showroom and two workshops of the Myanmar VES Joint Venture Co., Ltd. are located onaplot besides Myanma Gems Museum. As...
No.66 , Kaba Aye Pagoda Road , ( Beside of Myanma Gems Museum ), Yangon , Myanmar
New Shine Garment Accessories – Garment Accessories.
New Shine Garment Accessories Available in New Design of Garments’s Accessories. Services offered & Products available: BUTTONS SEWING APPLIQUES & EMBLEMS ELASTIC BRAIDS & CORDS INTERLINING MATERIALS & COLLAR STIFFENER OF BONE ZIPPER & SHOULDERS PADS EWING THREAS & NEEDLES...
Building (3), Room No (1), Sabai Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar
Giordano သည် အမျိုးသားဝတ်၊ အမျိုးသမီးဝတ်၊ ကလေးဝတ် အဝတ်အထည်များနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင္ဖြန့်ဖြူးပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။ Giordano သည် 1970 ခုနှစ်မှစပြီး casual အဝတ်အစား ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်အကျော်ကြားဆုံးအဝတ်အစား ဖြန့်ဖြူးသော Brand အဖြစ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ corporate value ဖြစ်တဲ့ quality , knowledge , innovation, service နှင့် simplicity စတဲ့အချက် တွေပေါ်မှာ ပစ်မှတ်ထားပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်...
Type of Fashion/Clothing